EURO 2016: Slovakia oo saddexda dhibcood ka dhigatay xulka Ruushka..+SAWIRRO – Gool FM
EURO 2016: Slovakia oo saddexda dhibcood ka dhigatay xulka Ruushka..+SAWIRRO
(France) 15 Juunyo 2016. Slovakia ayaa saddexdii dhibcood ugu horreysay ka heshay Euro 2016 kaddib markii ay 2-1 ku kartay xulka Ruushka.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 2-0 uu ku hogaaminayo xulka Slovakia.
Xulka Ruushka ayaa sheeganaya in laga diiday rigoore daqiiqadii 21-aad ee ciyaarta kaddib markii uu Dzyuba uu ku dhacay diilinta ganaaxa markii ay hardameen Durica lakiin garsooraha ayaa yiri koorno.
Labo daqiiqo kaddib Dzyuba ayaa misane fursad haley balse ka faa’iideyn waayay.
Fursad kale ayay heleen xulka Ruushka oo markaan waxaa misane ka faa’iideyn waayay Smolov daqiiqadii 28-aad kaddib daafacyada Slovakia oo habacsanaan muujinayay.
Da’yarkii hore ee Manchester City iyo Rangers ee Wiess ayaa hogaanka u dhiibay xulka Slovakia daqiiqadii 32-aad kubbad Qatar ahayd oo looga soo dhiibay meel yare fog isla markaana uu daafacyada dhexdooda ka dhaliyay.
Haddii uu goolkii hore ahaa mid Qatar ah midkan innaba caadi ma ahan kubbad ka timid koornada oo ay daafacyada meel dhow dhigteen ayuu kabtanka Napoli Marek Hamsik horey soo qaatay laad uu qabad siiyay shabaqa dhex dhigay.
Markii la isku soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta Ruushka ayaa galay dadaal xoogan sidii uu isaga gudi lahaa labada gool oo waxaa soo maray fursad khatar ah daqiiqadii 67-aad kubbad uu laaday Smolov waxaa lugta u dhigay daafaca Durica.
Wuxuu socdo dadaalka Ruushka waxay ugu dambeyn gool ka heleen Glushakov oo madaxa ku dhaliyay.
Sikastaba Ruushka ayaa heli waayay gool kale oo waxaa looga adkaaday 2-1, xulka Slovakia ayaa 3-dhibcood la leh xulka Wales oo beri la ciyaari doona xulka Ingiriiska oo hal dhibic wata.
Waa sidee rikoorka kulamada furitaanka Premier League ee Jose Mourinho?